Angase abhekane namacala uMengameli Zuma – LIVE Express
Angase aphinde abhekane namacala futhi uMengameli wezwe, u-Jacob Zuma, kulandela ukuchithwa kwesicelo ebesifakwe abameli bakhe kanye ne-National Prosecuting Authority (NPA) yi-North Gauteng High Court sokunikezwa igunya lokudlulisa isinqumo esathathwa yiyo le nkantolo ngenkathi inquma ukuthi kumele sibuyiselwe eceleni futhi sibuyekezwe isinqumo sokuhoxisa amacala enkohlakalo nokukhwabanisa ayebhekene noZuma.
Ngenkathi echithwa la macala, yilowo owayeyiNhloko yezokushushiswa komphakathi, u-Mokotedi Mpshe, wabeka isizathu sokuthi uZuma wakhelwa itulo elalihambisana nenhlese yezepolitiki ngokubekwa amacala kulandela ukuvela kwezingxoxo eziqoshiwe ezaziwa ngama-“spy tapes”.
NgoLwesihlanu, uLedwaba uchithe isicelo saZuma kanye ne-NPA ngelokuthi ukuphikisa kwabo kushaya eceleni futhi akunaphuzu elibambekayo.
Uthi i-NPA ayikwazi ukusebenzisa izingxoxo eziqoshiwe njengesizathu sokuchitha amacala ayebhekene noZuma.
uMengameli uZuma kanye ne-NPA kusengenzeka banikele eNkantolo yoMthethosisekelo ukuze baphikisane nalesi sinqumo.